निन्द्रा सम्बन्धी समस्याहरूसँग सामना गर्ने उपायहरू
हामी मध्ये धेरै जनालाई कहिलेकाहीँ निन्द्रा सम्बन्धी समस्याले सताएको हुन सक्छ । हामीलाई राती सुत्दा निन्द्रा नपर्ने, नानाथरीका कुरा मनमा खेल्ने, निदाएको बेला झसङ्ग भएर बिउँझिने र धेरै निन्द्रा लाग्ने जस्ता समस्याहरू आइपर्न सक्छन् । कहिलेकाहीँ यसो हुनुलाई भने स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ ।
राम्रोसँग निन्द्रा नपर्नुका धेरै कारणहरू हुन सक्छन् जस्तै मनमा पीर चिन्ता पर्नु, केही कुराको डरले सताउनु, कार्यालयमा तनाव वा धेरै कामको बोझ हुनु, अपर्याप्त निन्द्रा र थकानको कमी आदि ।
कहिलेकाहीँ निन्द्रा नपर्नुमा भुइँचालो, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा मानव सिर्जित दुर्घटना, विनाश वा नजिकका व्यक्तिको मृत्यु पनि हुन सक्छ ।
सर्वप्रथम त हामीले मानसिक रूपमा स्वस्थ र स्फूर्ति अनुभव गर्नको लागि एक दिनमा कम्तीमा पनि ७-८ घण्टा सुत्ने गर्नु राम्रो मानिन्छ । त्यस्तै, धेरै मात्रामा सुत्नु पनि शरीर र मनको लागि स्वस्थ्यकर मानिँदैन । धेरै सुत्ने बानी छ भने एउटा कार्यतालिका बनाई दिनभरि आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा व्यस्त राख्नु लाभदायक हुन सक्छ ।
पर्याप्त मात्रा सुत्नुका साथै राम्रो गुणस्तरको निन्द्रा हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागि सुत्ने स्थानको चयन गर्दा सकेसम्म हल्ला नहुने स्थान चयन गर्नु, सफा र स्वच्छ ओछ्यानमा सुत्नुका साथै सुत्ने स्थानको पनि धेरै फेरबदल नगर्ने गरेमा राम्रो निन्द्रा पर्न सक्छ । त्यस्तै, सुत्ने कोठामा उचित मात्रामा अन्धकार वा मधुरो प्रकाशको व्यवस्था गर्न सकेमा राम्रो निन्द्रा पर्न सक्छ ।
शरीरमा बढी मात्रामा अपच हुने खानेकुरा, धेरै तेल र बोसोयुक्त खानेकुरा, चिया, कफि लगायत चुरोट, खैनी, र मादक पदार्थको सेवनले गर्दा पनि निन्द्रामा समस्या हुन सक्छ । त्यसैले सुत्न जानु एकदुई घण्टाअघि पचाउन गाह्रो हुने कुरा सकभर नखानु नै वेश हुन्छ । त्यस्तै, मादक पदार्थको सेवनबाट बच्नु र धेरै मात्रामा चिया कफि नपिउनु नै निन्द्राको लागि राम्रो मानिन्छ ।
प्राकृतिक वा मानव निर्मित प्रकोप, विनाश आदिका कारण मानिसमा आत्तिने, रुने, कराउने, एकोहोरो हुने र बारम्बार घटनाको झझल्को आइरहने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन् जुन् असामान्य अवस्थामा मानिसले देखाउने स्वाभाविक प्रतिक्रियाहरू हुन् ।
समयको प्रवाहसँगै त्यस्ता घटनाहरूको प्रभाव पनि मत्थर भएर जान्छ । हाम्रो छरछिमेक र समाजमा अरु व्यक्तिहरूले पनि यस्ता प्रतिक्रियाहरू देखाउँदा उनीहरूलाई हामीले उक्त कुरा बुझाउनु आवश्यक हुन सक्छ ।
यस्तो बेला, परिवारका सदस्य, साथीभाइ र छरछिमेकका मानिसहरूले एकअर्काको साथ नछाड्ने र एक अर्कामा ढाडस दिने र सहयोग गर्नेे गरेमा समस्यासँग सामना गर्न आत्मबल मिल्छ ।
यस्तो बेला, आफ्नो मनस्थिति स्थिर नहुन्जेलसम्म सकेसम्म टी.भी. र अन्य मिडियाहरूबाट देखाइने मृत्यु, दुर्घटना र विनाशसँग सम्बन्धित समाचारहरुबाट टाढा बस्नु राम्रो हुन सक्छ ।
हिंसा र आघातजन्य घटना सम्बन्धी समाचार र दृश्यहरू बालबालिकाहरूको पहुँचबाट टाढा राख्नु राम्रो हुन्छ ।
यस्तो समयमा छरछिमेक र अन्यत्र फैलिने अनावश्यक हल्लाहरूको पछि नलाग्नु नै वेश हुन्छ ।
राम्रो निन्द्राको लागि योग, ध्यानका साथसाथै यसै वेभसाइटमा रहेका गहिरो श्वास प्रश्वास विधि, ध्यान केन्द्रित गर्ने अभ्यास र अन्य आरामदायी अभ्यासहरू लाभदायी हुन सक्छन् ।
कहिलेकाहीँ धेरै उपायहरू अपनाउँदा पनि राम्रोसँग निन्द्रा नपर्न सक्छ, मनमा धेरै कुराहरू खेल्न सक्छ वा कहिलेकाहीँ मध्य रातमा अचानक निन्द्राबाट बिउँझेर फेरि निदाउन गाह्रो हुन सक्छ । त्यस्तो बेला उल्टोबाट १०० देखि १ सम्म गन्ने उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
म जसरी पनि निदाउनै पर्छ भन्ने भावना त्याग्नु नै राम्रो हुन सक्छ । कहिलेकाहीं एक दुई दिन ननिदाउंदैमा पनि त्यति सारो केही बिती हाल्दैन ।
यस्ता विभिन्न उपायहरू अपनाउँदा पनि आफूमा कुनै सुधार आउँदैन र दैनिक जीवन यापन गर्न झन्झन् गाह्रो हुँदै जान्छ भने मनोसामाजिक स्याहारकर्ता, मनोविमर्शकर्ता, मनोविज्ञ वा मनोचिकित्सक जस्ता विशेषज्ञहरूको सहयोग लिनु आवश्यक हुन सक्छ जसको लागि टि.पि.ओ. नेपाल, बालुवाटार, काठमाडौंँमा सम्पर्क गर्नु होला ।